सडक आश्रितको साथी बन्दै - Pradesh Today सडक आश्रितको साथी बन्दै - Pradesh Today
पुष १५, २०७६ प्रदेश टुडे
दाङसहित देशका विभिन्न सहरमा सडकलाई आश्रमको रूपमा प्रयोग गर्ने नागरिक छन् । मानसिक सन्तुलन गुमाएका तथा आर्थिक रूपमा विपन्न समुदाय सडक पेटीलाई आश्रय बनाइरहेका छन् ।
सडकलाई ओछ्यान र आकासलाई छानोको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका सडक आश्रित नागरिकको उद्धार सरकारी तवरबाट हुन नसकेपनि अहिले विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाले अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन थालेका छन् ।
निलकमल सेवा आश्रम पनि मानवीय सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारसँगको समन्वयमा अहिले सडकमा बेसहारा बनेकाहरूको उद्धार तथा परिवारमा पुनस्र्थापनामा लागिरहेको छ ।
सडकमा बस्ने बेसहारा नागरिकको उद्धार तथा पुनस्र्थापनामा अभिभावकको भूमिका खेलिरहेको संस्थाले दाङसहित नेपालगंज, बर्र्दिया, कास्की लगायतका जिल्लामा काम गरिरहेको छ ।
दाङमा पनि झण्डै एकसाता अघिमात्रै सडक आश्रित नागरिकको उद्धार गरी राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ८ सिसहनियामा पालनपोषण गरी औषधि उपचार गरिरहेको छ ।
तुलसीपुर, घोराही, लमही, भालुवाङ लगायतका सहरबाट ३१ जनाको उद्धार गरिएको छ । सडकको सहारमा बाँचिरहेका नागरिकलाई उद्धार गरेर सडक आश्रित मानवमुक्त समाज निर्माण गर्ने संस्थाले अभियान थालेको छ ।
मन्दिरमा गएर लाखौं रूपैयाँ खर्च गर्नुको साटो मानवीय सेवामा समर्पित हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ संस्थाले थालेको अभियानलाई यहाँका स्थानीय सरकारले पनि साथ दिएका छन् । सबैको साथ र सहयोगले मात्रै यो अभियान सफल बनाउन सकिने भन्दै संस्थाले काम गरिरहेको छ ।
कोही नहुनेको दैव अवश्य हुन्छ भनेझैं मानसिक सन्तुलन गुमाएर तथा शारीरिक रूपले अशक्त नागरिकको उद्धारका लागि संस्था, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? सडकमा आश्रित नागरिकको उद्धार र प्रयासलाई सफल बनाउन भइरहेका प्रयासका बारेमा प्रदेश टुडेको राउण्ड टेबलमा सरोकारवाला निकायसँग कुराकानी गरेका छौं ।
नारायण सुवेदी ‘अमन’
नीलसागर सेवा आश्रम
सडकमा बेसहारा जीवन बिताइरहेका नागरिकको उचित व्यवस्थापनमा कसैको ध्यान पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा हामीले अब सडकलाई सहारा बनाइरहेकाहरूको उद्धार र पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ भनेर आजभन्दा करिब तीन वर्षअघि नीलसागर असहाय अशक्त तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको स्थापना गरेका हौँ ।
यसलाई हामी छोटकरीमा निलसागर सेवाश्रम पनि भन्ने गरेका छौँ । मानवीय सेवामा लाग्नुपर्छ भन्ने एउटै उद्देश्यका साथ हामी नौजना मिलेर वि.सं. २०७३ असोज १२ गते संस्थालाई विधिवतरूपमा दर्ता गरेर यो अभियानको शुरूवात गरेका हौँ ।
शुरूमा संस्था स्थापना गर्दा हामीले साथ र सहयोग पाउँदैनौँ कि भन्ने शंका थियो तर अहिले त्यो अवस्था छैन् । चुनौती थियो, चुनौती त अझै पनि छ तर पनि समस्या र चुनौतीसँग सामना गर्न सकिएन भने हामी सोचेको लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ ।
हामीहरू यो अभियानमा लागिरहदा शुरूमा त केही रातहरू भोकभोकै बसेर दिन बिताएका क्षणहरू पनि छन् । अभियान शुरूवात भएको चौथो दिन जब एक मुठी साग र एक बोरा चामल लिएर कोही आउनुभयो, त्यो दिनदेखि नै सहयोगको भरमा संस्था अहिलेसम्म यहाँ आइपुगेको छ ।
हामी पनि विभिन्न समस्याको सामना गर्दै सडकलाई सहारा बनाईरहेका नागरिकको उद्धारमा जुटेका छौँ । दाङसहित बाँके, बर्दिया, कास्कीलगायतका जिल्लामा हामीले यो उद्धार तथा पुनस्र्थापनाको काम गरिरहेका छौँ ।
सडक आश्रित नागरिकको उद्धार गरी अहिलेसम्म ३ सय २ जनालाई परिवारमा पुनस्र्थापना गरिसक्यौँ । मानसिक सन्तुलन गुमाएर परिवारबाट अपहेलित भएर सडकलाई सहारा बनाइरहनुभएका व्यक्तिलाई निको बनाएर परिवारमा पुनस्र्थापना गराउन पाउँदा जीवनको आनन्द त्यो भन्दा अरू छैन् ।
हामीले राम्रो काम गरेका छौँ भन्ने त्यो बेलामा महसुस हुन्छ, जतिबेला एउटा बेसहारा नागरिकलाई सहयोग गर्न पाउँछौ, सबै चिज, काम सबै सहज त हुँदैन् तर एउटा खुल्ला जीवन बिताइरहेका नागरिकलाई बसोबासको व्यवस्था गरी उहाँहरूको स्वास्थ्य उपचार गर्न कठिन भएपनि हामीले सहजरूपमा गरिरहेका छौँ ।
हामीहरूले अहिले खानपानदेखि स्वास्थ्य उपचारसम्म दानदाताकै भरमा चलाएका छौँ । तर कति दिन दानदाताको भरमा सञ्चालन हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि हुन्छ । सबै कुरा सरकारले गर्छ भन्ने पनि होइन् केही कुरा हामी आफैबाट शुरूवात गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ आएका छौँ ।
दाङमा पनि अहिलेसम्म ३१ जना सडक आश्रित नागरिकको उद्धार गरी राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ८ को सिसहनियमा खानपान, उपचारसहितको व्यवस्था गरेका छौँ । बढी गरेर मानसिक सन्तुलन गुमेका व्यक्तित्वहरू हुनुुहुन्छ । उहाँहरूको उपचार गरी परिवारमा पुनस्र्थापना गराउने हाम्रो लक्ष्य हो ।
मानसिक सन्तुलन गुमाएका उहाँहरूको मध्ये करिब ८० प्रतिशतको उपचारमा सम्भव हुन्छ । उहाँहरूको उपचारका लागि डाक्टरहरूको टिम खटिरहनुभएको छ । यो अभियानमा सरकारको सहयोग छ तर अझैपनि अपुग छ । सरकारले गरिरहेको सहयोगमा पनि सन्तुष्ट छौँ । दाङमा स्थानीय सरकारको पनि साथ र सहयोग राम्रो पाएका छौँ ।
सहयोग भौतिक मात्र हुँदैन् । हामीले स्थानीय सरकारको अन्य विविध कुरामा सहयोग पाएका छौँ । उहाँहरूले आगामी दिनमा आर्थिक सहयोग गर्ने पनि प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभएको छ । हाम्रो एक्लो प्रयासले मात्र यो अभियान सफल हुन्छ भन्ने होइन् आम नागरिक र सरकारको सहयोगले मात्र अभियान सार्थक बन्छ भन्ने लाग्छ ।
दाङमा एकैदिन ४४ जनामा कोरोना